ID Apple | September 2019
Hamaha ny fahadisoana "Tsy misy ny fanamarinana, tsy nahavita niditra tao"
Editor Ny Choice September 17,2019
Tena ID Apple
Fantatsika ny ID ilay adiresy adino
Apple ID - kaonty ilaina ho an'ny tompon'ny vokatra Apple rehetra. Amin'ny alàlan'ny fanampiany, dia azo atao ny maka ny votoatin'ny media amin'ny apple apple, mifandray amin'ny serivisy, manangona tahirin-tsakafo ao amin'ny toeram-pivarotana rahona ary maro hafa. Mazava ho azy, raha te hiditra ao ianao dia mila mahafantatra ny ID IDanao.
Miverina amin'ny tenimiafina ID ID
ID ny Apple no kaonty manan-danja indrindra fa ny mpampiasa Apple sy ny vokatra hafa amin'ity orinasa ity. Izy dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana vaovao momba ny fividianana, ny serivisy mifandraika, mifandray amin'ny banky, fitaovana ampiasaina, sns. Noho ny maha-zava-dehibe azy dia tadidio ny tenimiafina ho an'ny fahazoan-dàlana.
"Ny ID Apple dia voasakana amin'ny antony fiarovana": averinay indray ny fidirana amin'ny kaonty
Satria ny tranokala ID dia mirakitra fampahalalana maro momba ny fampiasana tsiambaratelo, mila fiarovana lehibe io kaonty io ka tsy hamela ny angon-drakitra hianjera amin'ny tanana diso. Ny iray amin'ireo vokatry ny fiarovana ny fiarovana dia ny hafatra "Voasakana ny ID IDanao noho ny antony ara-piarovana." Fanesorana ny fanakanana Apple ID momba ny fiarovana ny fiarovana Izany hafatra izany rehefa miasa amin'ny fitaovana mifandraika amin'ny ID ID dia mety hiteraka valifaty imbetsaka na manome valiny tsy marina amin'ny fanontaniana napetraky ny anao na olona hafa.
Fomba hanakanana ID ID
Ny endri-tseranana aparitaka Apple ID dia niseho tamin'ny fampisehoana iOS7. Ny mahasoa ity asa ity dia matetika no misalasala, satria tsy ireo mpampiasa ny fitaovana nangalarina (very) izay mampiasa azy matetika, fa ireo mpaneso, izay amin'ny famitahana dia manery ny mpampiasa hampiditra fotsiny ny IDan'ny olona iray hafa ary avy eo manakana ny gadget.
Ny ankamaroan'ny tompon'ireo gadget maoderina dia miatrika fahadisoana sasany mandritra ny dingan'ny fampiasana fitaovana. Ny mpampiasa ny fitaovana ao amin'ny rafitra iOS dia tsy tonga lafatra. Ny olana amin'ny fitaovana avy amin'i Apple dia tsy fahita firy ny miditra ao amin'ny ID IDanao. Apple ID - kaonty tokana izay ampiasaina amin'ny fifandraisana eo amin'ny serivisy Apple (iCloud, iTunes, App Store, sns.
Manao karatra banky avy amin'ny ID Apple izahay
Androany dia hijery ireo fomba izay ahafahanao mamoaka karatra banky Apple Eid. Ny fialana karatra ID iray na maromaro Na dia misy tranonkala iray ahafahana manantanara ny ID ny ID aza, izay ahafahanao mifandray amin'ny tahirin-kaonty rehetra, tsy afaka manala ny karatrao ianao: afaka manova ny fomba fiasa ianao.
Ahoana ny fanovana ny ID ID
Miasa amin'ny vokatra Apple, ny mpampiasa dia voatery hamorona kaonty Apple ID, raha tsy misy ny fifandraisana amin'ny gadget sy ny serivisy amin'ny mpamokatra voankazo lehibe indrindra. Rehefa nandeha ny fotoana dia mety ho efa lany andro ny fampahalalana ao amin'ny Apple Aidie, izay mety mila ilàna azy hanova azy io.
Hamafiso ny fifandraisana amin'ny server ID Apple ID
Mpisera maro amin'ny fitaovana ao amin'ny rafitra fiasa iOS isan'andro dia miatrika fahasarotana maro. Matetika izy ireo no mitranga noho ny fisehoan-javatra mampidi-doza sy olana ara-teknika mandritra ny fampiasana ny fampiharana, ny serivisy sy ny fitaovana isan-karazany. "Fahadisoana ny fifandraisana amin'ny server ID ID" dia iray amin'ireo olana mahazatra indrindra rehefa mifandray amin'ny kaontinao ID ID.
Ahoana ny famoronana ID IDO
Raha mpampiasa iray vokatra iray farafaharatsiny Apple ianao, dia tokony mila manana kaonty voasoratra anarana ao amin'ny Apple ID ianao, izay ny kaontinao manokana sy ny tahiry rehetra amin'ny fividiananao. Ahoana no hamoronana ity kaonty ity amin'ny fomba isan-karazany ao amin'ny lahatsoratra.
Ahoana ny fanovana ny tenimiafina avy amin'ny ID ID
Ny tenimiafina no fitaovana manan-danja indrindra hiarovana ny fampianarana ao amin'ny rakitsoratra, noho izany dia tokony ho azo itokisana izy. Raha tsy ampy hery ny tenimiafinao ao amin'ny ID ID Apple, dia mila minitra vitsivitsy hanovana izany ianao. Manova ny tenimiafinao IDA Apple. Araka ny fomban-drazana dia manana fomba maro aty aoriana ianao mamela anao hanova ny tenimiafinao.
Ahoana no hanaisotra ID ID
Ny mpampiasa ny vokatra Apple dia manana kaonty ao amin'ny ID ID voasoratra anarana izay ahafahanao mitahiry ny mombamomba ny kaontinao momba ny kaontinao, ny fomba fiasa mifototra, ny fitaovana mifandray, sns. Raha tsy mikasa ny hampiasa ny kaontinao Apple ianao dia azonao atao ny mamafa azy io. Mamafa ny kaonty ID Apple eto ambany Hijery ny fomba maro hamafana ny kaontinao Apple Eidie ianao, izay samy hafa amin'ny tanjona sy ny fahombiazany: ny voalohany dia hanafoana tanteraka ny kaonty, ny faharoa dia hanampy anao hanova ny angon-drakitra Apple ID, ka hanafaka ny adiresy mailaka amin'ny fisoratana anarana vaovao, ary ny fahatelo dia hamafa kaonty amin'ny fitaovana Apple.
Manamboatra ID Apple izahay
Ny ID ny Apple dia kaonty tokana izay ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny fampiharana ofisialy Apple (iCloud, iTunes, ary maro hafa). Azonao atao ny mamorona ity kaonty ity rehefa mametraka ny fitaovana ampiasainao na rehefa miditra ao amin'ny fampiharana sasany, ohatra, ireo izay voalaza etsy ambony. Avy amin'ity lahatsoratra ity, afaka mianatra ny fomba hamoronana ny IDanao manokana ianao.
https://termotools.com mg.termotools.com © ID Apple 2019